နို.နှစ်လုံးဖိုးအကျေဆပ်နည်း / Бесплатный видео чат Conferendo
There is no fire like lust.
***Myanmar Tipitaka ပိဋကသုံးပုံမြန်မာပြန်***
***၀ိနည်း*** ၁။ ၀ိနည်းပိဋက ပါရာဇိကဏ်ပါဠိတော်မြန်မာပြန် http://minus.com/m4CXK9GDN ၂။ ပါစိတ္တယ
၀ိနည်းပိဋက ပါစိတ်ပါဠိတော်မြန်မာပြန် ၅-ဘိက္ခုပါစိတ်ခန်း http://minus.com/mbm800Rt5o ၀ိနည်းပိဋက ပါစိတ်ပါဠိတော်မြန်မာပြန် ဘိက္ခုနီဝိဘင်း http://minus.com/mbfvaL1CE5 ၃။ ၀ိနည်းပိဋက မဟာဝဂ်ပါဠိတော်မြန်မာပြန် http://minus.com/mSRlTNIeQ ၄။ ၀ိနည်းပိဋက စူဠ၀ဂ်ပါဠိတော်မြန်မာပြန် http://minus.com/mGXOYf46 ၅။ ၀ိနည်းပိဋက ပရိဝါပါဠိတော်မြန်မာပြန် http://minus.com/mN49sQLDx ***သုတ္တန်*** *ဒီဃနိကာယ* ၁။ ဒီဃနိကာယ် သီလက္ခန်ပါဠိတော်မြန်မာပြန် http://minus.com/mbxEvjmKx ၂။ ဒီဃနိကာယ် မဟာဝဂ်ပါဠိတော်မြန်မာပြန် http://minus.com/mboVITNmr0 ၃။ ဒီဃနိကာယ် ပါထိက၀ဂ်ပါဠိတော်မြန်မာပြန် http://minus.com/mbglWv9dF6 * မဇ္ဈိမနိကာယ* ၁။ မဇ္ဈိမနိကာယ် မူလပဏ္ဏာသပါဠိတော်မြန်မာပြန် http://minus.com/moL0IOq8r ၂။ မဇ္ဈိမနိကာယ် မဇ္ဈိမပဏ္ဏာသပါဠိတော်မြန်မာပြန် http://minus.com/mWUu70yPz ၃။ မဇ္ဈိမနိကာယ် ဥပရိပဏ္ဏာသပါဠိတော်မြန်မာပြန် http://minus.com/mbgHGYEEvR *သံယုတ္တနိကာယ* ၁။ သံယုတ္တနိကာယ် သဂါထာဝဂ္ဂသံယုတ်ပါဠိတော်မြန်မာပြန် http://minus.com/miooDFrkZ ၂။ သံယုတ္တနိကာယ် နိဒါန၀ဂ္ဂသံယုတ်ပါဠိတော်မြန်မာပြန် http://minus.com/mvyfqI5FR ၃။ သံယုတ္တနိကာယ် ခန္ဓ၀ဂ္ဂသံယုတ်ပါဠိတော်မြန်မာပြန် http://minus.com/mB9Hzxt2G ၄။ သံယုတ္တနိကာယ် သဠာယတန၀ဂ္ဂသံယုတ်ပါဠိတော်မြန်မာပြန် http://minus.com/mktKhOWqN ၅။ သံယုတ္တနိကာယ် မဟာဝဂ္ဂသံယုတ်ပါဠိတော်မြန်မာပြန် http://minus.com/mYM4e2rmz *အင်္ဂုတ္တရနိကာယ* ၁။ အင်္ဂုတ္တရနိကာယ် အင်္ဂုတ္တိုရ်ပါဠိတော်မြန်မာပြန် ဧကကနိပါတ် http://minus.com/mO66jUI1o ၂။ အင်္ဂုတ္တရနိကာယ် အင်္ဂုတ္တိုရ်ပါဠိတော်မြန်မာပြန် ဒုကနိပါတ် http://minus.com/mfR0gojHO ၃။ အင်္ဂုတ္တရနိကာယ် အင်္ဂုတ္တိုရ်ပါဠိတော်မြန်မာပြန် တိကနိပါတ် http://minus.com/mbbPcUYjGN ၄။ အင်္ဂုတ္တရနိကာယ် အင်္ဂုတ္တိုရ်ပါဠိတော်မြန်မာပြန် စတုက္ကနိပါတ် http://minus.com/mbgRWCwsH5 ၅။ အင်္ဂုတ္တရနိကာယ် အင်္ဂုတ္တိုရ်ပါဠိတော်မြန်မာပြန် ပဉ္စကနိပါတ် http://minus.com/mEfaU6AAY ၆။ အင်္ဂုတ္တရနိကာယ် အင်္ဂုတ္တိုရ်ပါဠိတော်မြန်မာပြန် ဆက္ကနိပါတ် http://minus.com/mzjbIz9XS ၇။ အင်္ဂုတ္တရနိကာယ် အင်္ဂုတ္တိုရ်ပါဠိတော်မြန်မာပြန် သတ္တကနိပါတ် http://minus.com/mPr8A0DP1 ၈။ အင်္ဂုတ္တရနိကာယ် အင်္ဂုတ္တိုရ်ပါဠိတော်မြန်မာပြန် အဋ္ဌကနိပါတ် http://minus.com/mwibpH6Oe ၉။ အင်္ဂုတ္တရနိကာယ် အင်္ဂုတ္တိုရ်ပါဠိတော်မြန်မာပြန် န၀ကနိပါတ် http://minus.com/mQG18zftf ၁၀။ အင်္ဂုတ္တရနိကာယ် အင်္ဂုတ္တိုရ်ပါဠိတော်မြန်မာပြန် ဒသကနိပါတ် http://minus.com/mZBLhamdV ၁၁။ အင်္ဂုတ္တရနိကာယ် အင်္ဂုတ္တိုရ်ပါဠိတော်မြန်မာပြန် ဧကာဒသကနိပါတ် http://minus.com/mgSRPETnM *ခုဒ္ဒကနိကာယ* ၁။ ခုဒ္ဒနိကာယ် ခုဒ္ဒကပါဌပါဠိတော်မြန်မာပြန် http://minus.com/mhXOh3XGT ၂။ ခုဒ္ဒနိကာယ် ဓမ္မပဒပါဠိတော်မြန်မာပြန် http://minus.com/mVEYf8ol7 ၃။ ခုဒ္ဒနိကာယ် ဥဒါန်းပါဠိတော်မြန်မာပြန် http://minus.com/mbe6DmgRbg ၄။ ခုဒ္ဒနိကာယ် ဣတိဝုတ်ပါဠိတော်မြန်မာပြန် http://minus.com/mHFin2iYO ၅။ ခုဒ္ဒနိကာယ် သုတ္တနိပါတ်ပါဠိတော်မြန်မာပြန် http://minus.com/m7MCHYAGg ၆။ ခုဒ္ဒနိကာယ် ၀ိမာန၀တ္ထုပါဠိတော်မြန်မာပြန် http://minus.com/mfarGKHdz ၇။ ခုဒ္ဒနိကာယ် ပေတ၀တ္ထုပါဠိတော်မြန်မာပြန် http://minus.com/mskiDt6BA ၈။ ခုဒ္ဒနိကာယ် ထေရဂါထာ( မြန်မာပြန်မရှိသေးပါ။) ၉။ ခုဒ္ဒနိကာယ် ထေရီဂါထာ(မြန်မာပြန်မရှိသေးပါ။) ၁၀။ ခုဒ္ဒနိကာယ် ဇာတ်(မြန်မာပြန်မရှိသေးပါ။) ၁၁။ ခုဒ္ဒနိကာယ် နိပါတ်(မြန်မာပြန်မရှိသေးပါ။) ၁၂။ ခုဒ္ဒနိကာယ် ပဋိသ မ္ဘိဒါမဂ်ပါဠိတော်မြန်မာပြန် http://minus.com/mVojL3iMr ၁၃။ ခုဒ္ဒနိကာယ် ထေရာပဒါန်ပါဠိတော်မြန်မာပြန် http://minus.com/mbzJqJ7XC ထေရီအပဒါန်ပါဠိတော်မြန်မာပြန် http://minus.com/mJ3jbYsIb ၁၄။ ခုဒ္ဒနိကာယ် ဗုဒ္ဓ၀ံသပါဠိတော်မြန်မာပြန် http://minus.com/mbqcSp9koE ၁၅။ ခုဒ္ဒနိကာယ် စရိယာပိဋကပါဠိတော်မြန်မာပြန် http://minus.com/mZEvWemnL ၁၆။ ခုဒ္ဒနိကာယ် မိလိန္ဒပဥှာပါဠိတော်မြန်မာပြန် http://minus.com/mHaC1TRam ***အဘိဓမ္မာ** ၁။ အဘိဓမ္မပိဋကဓမ္မသင်္ဂဏီပါဠိတော်မြန်မာပြန် http://minus.com/m8FXOVgpY ၂။ အဘိဓမ္မပိဋက ၀ိဘင်္ဂပါဠိတော်မြန်မာပြန် အဘိဓမ္မပိဋက ၀ိဘင်္ဂပါဠိတော်မြန်မာပြန် ၁-ခန္ဓ၀ိဘင်္ဂ http://minus.com/mv2apA76W အဘိဓမ္မပိဋက ၀ိဘင်္ဂပါဠိတော်မြန်မာပြန် ၂-အာယတန၀ိဘင်္ဂ http://minus.com/mudKE7Pr4 အဘိဓမ္မပိဋက ၀ိဘင်္ဂပါဠိတော်မြန်မာပြန် ၃-ဓာတုဝိဘင်္ဂ http://minus.com/m8LA5QbHa အဘိဓမ္မပိဋက ၀ိဘင်္ဂပါဠိတော်မြန်မာပြန် ၄-သစ္စ၀ိဘင်္ဂ http://minus.com/mpWnpqODG အဘိဓမ္မပိဋက ၀ိဘင်္ဂပါဠိတော်မြန်မာပြန် ၅-ဣန္ဒြိယ၀ိဘင်္ဂ http://minus.com/mH96iaKre အဘိဓမ္မပိဋက ၀ိဘင်္ဂပါဠိတော်မြန်မာပြန် ၆- ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ၀ိဘင်္ဂ http://minus.com/mTAjZrIVe အဘိဓမ္မပိဋက ၀ိဘင်္ဂပါဠိတော်မြန်မာပြန် ၇-သတိပဋ္ဌာန၀ိဘင်္ဂ http://minus.com/mrzRjrtVc အဘိဓမ္မပိဋက ၀ိဘင်္ဂပါဠိတော်မြန်မာပြန် ၈-သမ္မပ္ပဓာန၀ိဘင်္ဂ http://minus.com/mbnJS45qvb အဘိဓမ္မပိဋက ၀ိဘင်္ဂပါဠိတော်မြန်မာပြန် ၉-ဣဒ္ဓိပါဒ၀ိဘင်္ဂ http://minus.com/mtKGAUny1 အဘိဓမ္မပိဋက ၀ိဘင်္ဂပါဠိတော်မြန်မာပြန် ၁၀-ဗောဇ္ဈင်္ဂ၀ိဘင်္ဂ http://minus.com/mbllvjlsoN အဘိဓမ္မပိဋက ၀ိဘင်္ဂပါဠိတော်မြန်မာပြန် ၁၁-မဂ္ဂင်္ဂ၀ိဘင်္ဂ http://minus.com/m4DjqTDfA အဘိဓမ္မပိဋက ၀ိဘင်္ဂပါဠိတော်မြန်မာပြန် ၁၂-ဈာန၀ိဘင်္ဂ http://minus.com/mjGXiMyQs အဘိဓမ္မပိဋက ၀ိဘင်္ဂပါဠိတော်မြန်မာပြန် ၁၃-အပ္ပမညာဝိဘင်္ဂ http://minus.com/mDQNGAaBL အဘိဓမ္မပိဋက ၀ိဘင်္ဂပါဠိတော်မြန်မာပြန် ၁၄-သိက္ခာပဒ၀ိဘင်္ဂ http://minus.com/mlDWCczT0 အဘိဓမ္မပိဋက ၀ိဘင်္ဂပါဠိတော်မြန်မာပြန် ၁၅-ပဋိသ မ္ဘိဒါဝိဘင်္ဂ http://minus.com/mLw4BZaxI အဘိဓမ္မပိဋက ၀ိဘင်္ဂပါဠိတော်မြန်မာပြန် ၁၆-ဉာဏ၀ိဘင်္ဂ http://minus.com/mbaND0rVAi အဘိဓမ္မပိဋက ၀ိဘင်္ဂပါဠိတော်မြန်မာပြန် ၁၇-ခုဒ္ဒက၀တ္ထုဝိဘင်္ဂ http://minus.com/mHtwWFc6r အဘိဓမ္မပိဋက ၀ိဘင်္ဂပါဠိတော်မြန်မာပြန် ၁၈-ဓမ္မဟဒယ၀တ္ထုဝိဘင်္ဂ http://minus.com/mbccfd7Nnt ၃။ ဓာတုကထာ(မြန်မာပြန်မရှိသေးပါ။) ၄။ အဘိဓမ္မာပိဋက ပုဂ္ဂလပညတ်ပါဠိတော်မြန်မာပြန် http://minus.com/mMvKkXkZD ၅။ အဘိဓမ္မာပိဋက ကထာဝတ္ထုပါဠိတော်မြန်မာပြန် http://minus.com/mkCJuNOSv ၆။ ယမက(မြန်မာပြန်မရှိသေးပါ။) ၇။ ပဋ္ဌာန(မြန်မာပြန်မရှိသေးပါ။) ------------------------------------------------------------------------ ပေးထားသော လင့်ခ် link များကိုဖွင့်၍ ပါဠိတော်မြန်မာပြန်ကျမ်းများကို လေ့လာနာယူနိုင်ပါသည်။
* There is no crime like hatred.
ဒေါသနှင့်တူသော အပြစ်သည် မရှိ။
* There is no fire like lust.
ရာဂနှင့်တူသော အပူမီးသည် မရှိ။
*Hunger is the worst of diseases.
*Contentment is the greatest wealth.
*ံHealth is the highest gain.
ချစ်ခြင်းသည် နှိပ်စက်တတ်သော တရားဖြစ်၏။ ချစ်ခင်ခြင်းနှိပ်စက်အပ်သော သူသည် မကောင်းမှုကို
ကြံစည်တတ်၏။ မကောင်းမှုကို ကြံစည်ခြင်းကြောင့် မကောင်းသော အကျိုးတရားတို.သည် ဖြစ်၏။
စိတ်ဆင်းရဲခြင်း ကိုယ်ဆင်းရဲခြင်းသည် ဖြစ်၏။
ချစ်ခြင်း၏ အလိုကို မလိုက်ဘဲ မကောင်းမှုမှ ရှောင်ကြဉ်ရာ၏။ မကောင်းမှူမှ ရှောင်ကြဉ်ခြင်းသည်
မြတ်၏။ ကောင်းသော အမှုကို ပြုခြင်းကြောင့် နောင်တ တဖန်ပူပန်ရခြင်းသည် မရှိ။
*အန န္တငါးပါး ဦးညွှတ်တွား*
* သတ္တ၀ါအကျိုး၊ ရွက်သယ်ပိုး တန်ဖိုးမြင့်မြတ်၊ မနှိုင်းအပ် ဗုဒ္ဓမြတ်စွာ၊ ရတနာအား ရှိခိုးဦးချ၊ ရိုသေရမည်။ * ကျင့်လျှင်ချမ်းသာ၊ စိတ်မှာဆောင်ထား အကျိုးများသည့်၊ တရားတော်အား ရှိခိုးဦးချ၊ ရိုသေရမည်။ * သာသနာတော်၊ ရှည်ကြာတည်ရန် အကျင့်မှန်သော၊ သံဃာတော်အား ရှိခိုးဦးချ၊ ရိုသေရမည်။ * ကျေးဇူးလည်းများ၊ မေတ္တာပွါးသည့် မိဘတို.အား၊ ရှိခိုးဦးချ ရိုသေရမည်။ * အတတ်လည်းသင်၊ ဆုံးမပြင်သော ကျေးဇူးထင်ရှား၊ ဆရာတို.အား ရှိခိုးဦးချ၊ ရိုသေရမည်။ သီဟ(ရေဦး)
မချစ်သင့်ရာ ၊ ချစ်မိလာသည့်
မခေါ်သော်လည်း၊ သောကမီးသည်
" လမ်း "
* အရေခွံအဟောင်းပျောက် အရေခွံအသစ်ရောက်
* ကျေးဇူးရှင်ငါးပါး မပြစ်မှားရာ *
- ဘုရား တရား သံဃာ၊ မိဘဆရာ အနန္တငါးပါး၊ ပြစ်မှားသူမှာ ဂုဏ်သိက္ခာကျ၊ လားရပါယ်ရွာ - ဤအကုသိုလ်အမှု၊ မပြုရှောင်ခွါ အကျိုးများ၊ ချမ်းသာတိုးပွါးမှာ တမလွန်ဘ၀၊ ရောက်ရနတ်တို.ရွာ။ သီဟ(ရေဦး)
* အချစ်ဆိုတာ *
* ကျနော် ဆယ်ကျော်သက်အရွယ်က အချစ်ကို တွယ်တာ အချစ်၌အရူးအမူး အလွန်ထူးတဲ့အရာလို.ထင်ခဲ့။ * ကျနော် ဗုဒ္ဓတရားတော်ကို ဦးခိုက် ဉာဏ်စိုက်သည့်သမယ အသိတစ်ခုရလိုက်ပြီ။ * အချစ်ဆိုတာ အနှစ်မပါတဲ့ အလစ်အဟာပါပဲ။ * အချစ်ဆိုတာ နှစ်လိုဟန်ပြတဲ့ မိတ်ဆွေတု မိတ်ဆွေယောင်ဆောင်တဲ့ ရန်သူအစစ်ပဲ။ * သာယာဖွယ်တန်ဆာနဲ. ကိုယ့်အနားမှာချဉ်းကပ် တဖြည်းဖြည်းသတ်မယ့် ရန်သူတပ်သားပဲ။ သီဟ(ရေဦး)
* အခင်းတစ်ထည် *
* မမယ် ထည့်မယ်
* စိတ်ရောဂါ *
* ကိုယ့်စိတ်ရောဂါ၊ ကိုယ့်ဖာသာ၊ အမြန်ကုရမှာ။ * ဘုရားသာသနာ၊ ဆေးနည်းရှာ ကိုယ်တိုင်မှတ်ရမှာ။ * ကိုယ်ကိုတိုင်သာ၊ ဆေးစပ်ခါ အမြန်သောက်ရမှာ။ သီဟ(ရေဦး)
* မီးကို မီးနဲ.ငြှိမ်းတာ
* ကြိုက်ကြိုက် မကြိုက်ကြိုက်
* ပဲ့တင်သံ *
* ဆန္ဒဆိုး *
* တရားတော်* (၂)
* ရတနာသုံးပါး*၁။ ဘုရားရတနာ၂။ တရားရတနာ၃။ သံဃာရတနာ။* အနေ န္တာအန န္တငါးပါး*၁။ ဘုရား၂။ တရား၃။ သံဃာ၎။ မိဘ၅။ ဆရာ။* ကပ်သုံးပါး*၁။ ရောဂါကပ်၂။ လက်နက်ကပ်၃။ ငတ်မွတ်ခြင်းကပ်။*ပစ္စည်းဥစ္စာနှင့်ဆက်ဆံသော ရန်သူမျိုးငါးပါး*၁။ မီး၂။ ရေ၃။ မင်း၎။ ခိုးသူ၅။ မချစ်မနှစ်သက်သော အမွေခံတို.။
ထိုမြတ်စွာဘုရားသည် ဤသို.ပူဇော်အထူးကို ခံတော်မူထိုက်သော အကြောင်းကြောင့်လည်း အရဟံ မည်တော်မူ၏။ အလုံးစုံသော တရားတို.ကို ကိုယ်တိုင် မှန်စွာသိတော်မူသော အကြောင်းကြောင့်လည်း သမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓ မည်တော်မူ၏။ အသိဉာဏ်(၀ိဇ္ဇာ)၊ အကျင့်(စရဏ)နှင့်ပြည့်စုံတော်မူသော အကြောင်းကြောင့်လည်း ၀ိဇ္ဇာစရဏသမ္ပန္န မည်တော်မူ၏။
ကောင်းသော စကားကို ဆိုတော်မူတတ်သော အကြောင်းကြောင့်လည်း သုဂတ မည်တော်မူ၏။ လောကကို သိတော်မူသော အကြောင်းကြောင့်လည်း လောက၀ိဒူ မည်တော်မူ၏။
ဆုံးမထိုက်သော သူကို ဆုံးမတတ်သည့် အတုမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တော်မူသော အကြောင်းကြောင့်လည်း အနုတ္တရောပုရိသဒမ္မသာရထိ မည်တော်မူ၏။ နတ်လူတို.၏ဆရာဖြစ်တော်မူသော
အကြောင်းကြောင့်လည်း သတ္ထာဒေ၀မနုဿာနံ မည်တော်မူ၏။ သစ္စာလေးပါးတရားတို.ကို သိတော်မူသော အကြောင်းကြောင့်လည်း ဗုဒ္ဓမည်တော်မူ၏။ ဘုန်းတန်ခိုးကြီးတော်မူသော အကြောင်းကြောင့်လည်း ဘဂ၀ါ မည်တော်မူ၏။
တရားတော်သည် မြတ်စွာဘုရား ကောင်းစွာဟောကြားထားသော တရားတော်ပါပေတည်း။
အခါမလင့် အကျိုးပေးသော တရားတော်ပါပေတည်း။
လာလှည့် ရှုလှည့်ပါဟု ပြထိုက်သော တရားတော်ပါပေတည်း။
မိမိ၏ ကိုယ်ထဲစိတ်ထဲ၌ ဆောင်ယူထားထိုက်သော တရားတော်ပါပေတည်း။
(အရိယာ)ပညာရှိတို.သာ ကိုယ်စီကိုယ်ငှ သိနိုင် ခံစားနိုင်သော တရားတော်ပါပေတည်း။
မြတ်စွာဘုရား၏ တပည့်သားသံဃာတော်သည် ကောင်းသော အကျင့်ရှိတော်မူ၏။
မြတ်စွာဘုရား၏ တပည့်သားသံဃာတော်သည် ဖြောင့်မတ်သော အကျင့်ရှိတော်မူ၏။
မြတ်စွာဘုရား၏ တပည့်သားသံဃာတော်သည် မှန်သော အကျင့်ရှိတော်မူ၏။
မြတ်စွာဘုရား၏ တပည့်သားသံဃာတော်သည် လျော်ကန်သော အကျင့်ရှိတော်မူ၏။
အစုံအားဖြင့်လေးစုံ ပုဂ္ဂိုလ်အားဖြင့် ရှစ်ပါးအရေအတွက်ရှိသော မြတ်စွာဘုရား၏ တပည့်သားသံဃာတော်သည် အရပ်ဝေးမှ ဆောင်လာ၍သော်လည်း ပေးလှူပူဇော်ရန်
ထိုက်တန်တော်မူပါပေ၏။ ဧည့်သည်တို.အလို.ငှါ စီမံထားသော ၀တ္ထုကိုသော်လည်း ခံတော်မူထိုက်ပါပေ၏။ တမလွန်အတွက်ရည်မြှော်သော အလှူကို ခံတော်မူထိုက်ပါပေ၏။
လက်အုပ်ချီခြင်းကို ခံတော်မူထိုက်ပါပေ၏။ သတ္တ၀ါအပေါင်း၏ ကောင်းမှုပြုရန် အမြတ်ဆုံးလယ်မြေဖြစ်ပါပေ၏။
၂။ တာဝတိံသာနတ်ပြည်
၃။ အနာရောဂါဖြစ်၍ ပျက်စီးခြင်း
၁။ မင်းဆိုးအုပ်ချုပ်သော ကာလမှာ ဖြစ်ရခြင်း
၂။ အပါယ်လေးဘုံမှာ ဖြစ်ရခြင်း
၄။ မှန်ကန်သော ကြိုးစားအားထုတ်မှုမရှိခြင်း။
၁။ သူ.အသက်ကို မသတ်ခြင်း
၂။ သူ.ဥစ္စာကို မခိုးယူခြင်း
၃။ ကာမဂုဏ်တို.မှာ မှားယွင်းစွာမကျင့်ခြင်း
၄။ မဟုတ်မမှန် မဆိုခြင်း
၅။ သေအရက်ကို မသောက်ခြင်း။
၁။ ကိုယ်ဖြင့် ရှိခိုးခြင်း
၂။ နှုတ်ဖြင့် ရှိခိုးခြင်း
၃။ စိတ်ဖြင့် ရှိခိုးခြင်း။
၄။ အနန္တရပစ္စယော၊
၅။ သမနန္တရပစ္စယော၊
(ပဋ္ဌာန်းတော်ကို ရွတ်ဆိုပူဇော်လျှင် ဘေးရန်ကင်းပါသည်။)
* ယုံမှားသံသယရှိလျှင် ကျမ်းဂန်တို.၌ လေ့လာပါဗျာ။*
" ကုစားဖြေဖျောက်၍ မရသောကံငါးပါး"
၁။ အမိကို သတ်သောကံ၊
၂။ အဖကို သတ်သောကံ၊
၃။ ရဟန္တာကို သတ်သောကံ၊
၄။ သတ်တော်ထင်ရှားမြတ်စွာဘုရားကို သွေးစိမ်းတည်အောင်ပြုသောကံ၊
၅။ သံဃာကို သင်းခွဲသောကံ။
" သစ္စာလေးပါး "
" ကံသုံးပါး "
ကာယကံ၊ oစီကံ၊ မနောကံ။
* ဆွမ်းလှူခြင်း၏ အကျိုးငါးပါး *
* ယောက်ျားအားမိန်းမကြိုက်သော အချက်ငါးပါး *
*တပည့်ဝတ္တရားငါးပါး*၁။ နေရာမှထ၍ ကြိုဆိုခြင်း၊၂။ ခစားဆည်းကပ်ခြင်း၊
၃။ စကားကို နာယူခြင်း၊
၄။ ရိုသေစွာ ပြုစုလုပ်ကျွေးခြင်း၊၅။ အတတ်ပညာတို.ကို ရိုသေစွာသင်ယူခြင်း။
* ဆရာ့ဝတ္တရားငါးပါး* အတတ်လည်းသင်၊ ပဲ့ပြင်ဆုံးမ သိပ္ပမချန်၊ ဘေးရန်ဆီးကာ သင့်ရာအပ်ပို.၊ ဆရာတို. ကျင့်ဖို.၀တ်ငါးဖြာ။
* သားသမီးဝတ္တရားငါးပါး *
*ငယ်သော်လည်း မထီမဲ့မြင်မပြုအပ်သော အရာလေးပါး*
*မမေ့ခြင်းသည် မသေခြင်း၏ အကြောင်းဖြစ်၏။ မေ့ခြင်းသည် သေခြင်း၏ အကြောင်းဖြစ်တော့သည်သာ။ * ...* **အလွန်ကဲဆုံးတရားများ*** ကျန်းမာခြင်းသည် အလွန်ကဲဆုံးလာဘ်ဖြစ်၏။
၀တ္ထုအလှူအားလုံးတို.တွင် ကျောင်းအလှူသည် အမြတ်ဆုံးဖြစ်၏။
အလှူအားလုံးတို.တွင် တရားအလှူသည် အမြတ်ဆုံးဖြစ်၏။
အရသာတို.တွင် စင်စစ်အကောင်းမြတ်ဆုံးအရသာသည် သစ္စာတရားတည်း။
သားသမီးတို.တွင် မိဘစကားကိုနာယူသော သားသမီးသည် အမြတ်ဆုံးဖြစ်၏။
လောက၌ အကောင်းဆုံးအရာသည် သီလဖြစ်၏။
ခန္ဓာနှင့်တူသော ဆင်းရဲဒုက္ခသည် မရှိ။
ရဟန်းတို. ပေးလှူကြောင်းဖြစ်သော ယုံကြည်မှု`သဒ္ဓါ´၊ ပေးလှူကြောင်းဖြစ်သော ရှက်မှု`ဟိရီ´၊
အပြစ်မရှိသော ပေးလှူမှု`ဒါန´ ထိုတရားတို.သည် သူတော်ကောင်းတို.သို. အစဉ်လိုက်ကုန်၏။ ထိုစကားသည် မှန်၏။ ထိုတရားအပေါင်းကို နတ်ပြည်ရောက်ကြောင်းလမ်းဟု ဆိုကုန်၏။
ထိုတရားအပေါင်းဖြင့် နတ်ပြည်သို. သွားရ၏ဟု (မိန်.တော်မူ၏။)
ရဟန်းတို. သူတော်ကောင်းတို.၏ပေးလှူခြင်းတို.သည် ဤရှစ်မျိုးတို.တည်း။
အဘယ်ရှစ်မျိုးတို.နည်းဟူမူ သန်.ရှင်းစင်ကြယ်သော လှူဖွယ်ဝတ္ထုကို ပေးလှူ၏။ မွန်မြတ်သော လှူဖွယ်ဝတ္ထုကို ပေးလှူ၏။ သင့်လျော်လျောက်ပတ်သော အခါ၌ ပေးလှူ၏။ အပ်သော လှူဖွယ်ဝတ္ထုကို ပေးလှူ၏။ အလှူခံပုဂ္ဂိုလ် လှူဖွယ်ဝတ္ထုကို ရွေးချယ်စိစစ်၍ ပေးလှူ၏။
မပြတ်ပေးလှူ၏။ ပေးလှူသည်ရှိသော် စိတ်ကို ကြည်လင်စေ၏။ ပေးလှူပြီးနောက် နှစ်သက်သောစိတ်ရှိ၏။
ရဟန်းတို. သူတော်ကောင်းတို.၏ ပေးလှူခြင်းတို.သည် ဤရှစ်မျိုးတို.တည်းဟု (မိန်.တော်မူ၏။)
လယ်ယာမြေကောင်းသဖွယ်ဖြစ်သော မြတ်သော အကျင့်ကို ကျင့်လေ့ရှိသော ပုဂ္ဂိုလ်တို.၌ သန်.ရှင်းစင်ကြယ်သော မွန်မြတ်သော အပ်သော အဖျော် ခဲဖွယ် ဘောဇဉ်ဟူသော လှူဖွယ်ကို လျောက်ပတ်သော အခါ၌ မပြတ်ပေးလှူ၏။
များစွာသော အာမိသကို စွန်.လှူပြီး၍ နှလုံးမသာရှိသည် မဖြစ်ရာ။ ဤသို. လှူအပ်သော အလှူတို.ကို အထူးရှုမြင်နိုင်သူတို.သည် ချီးမွမ်းကုန်၏။
သဒ္ဓါတရားနှင့်ပြည့်စုံသော ထက်မြတ်သော ညာဏ်ရှိသော ပညာရှိသည် လွတ်လွတ်စွန်.ကြဲသော စိတ်ဖြင့် ဤသို.ပေးလှူပူဇော်၍ ဆင်းရဲမရှိရာ ချမ်းသာသော (လူ.ပြည်၊နတ်
ရဟန်းတို. တရားလေးမျိုးတို.နှင့်ပြည့်စုံသောသူသည် ဆောင်ယူ၍ ချထားအပ်သကဲ့သို. ဤအတူ ငရဲသို. ရောက်ရ၏။
အဘယ်လေးမျိုးတို.နည်းဟူမူ သူ.အသက်ကို သတ်လေ့ရှိ၏။ မပေးသည်ကို ယူလေ့ရှိ၏။ ကာမဂုဏ်တို.၌ မှားယွင်းစွာ ကျင့်လေ့ရှိ၏။ မဟုတ်မမှန်ပြောလေ့ရှိ၏။
ရဟန်းတို. ဤတရားလေးမျိုးတို.နှင့် ပြည့်စုံသော သူသည် ဆောင်ယူ၍ ချထားအပ်သကဲ့သို.
ဤအတူ ငရဲသို. ရောက်ရ၏။
ရဟန်းတို. တရားလေးမျိုးတို.နှင့် ပြည့်စုံသော သူသည် ဆောင်ယူ၍ ချထားအပ်သကဲ့သို.
ဤအတူ နတ်ပြည်သို. ရောက်ရ၏။
အဘယ်လေးမျိုးတို.နည်းဟူမူ သူ.အသတ်ကို သတ်ခြင်းမှ ရှောင်ကြဉ်၏။ မပေးသည်ကို ယူခြင်းမှ ရှောင်ကြဉ်၏။ ကာမဂုဏ်တို.၌ မှားယွင်းစွာကျင့်ခြင်းမှ ရှောင်ကြဉ်၏။ မဟုတ်မမှန်ပြောခြင်းမှ ရှောင်ကြဉ်၏။
ဤအတူ နတ်ပြည်သို. ရောက်ရ၏ ဟု (မိန်.တော်မူ၏။)
* မေတ္တာသုတ်တော် *
ရဟန်းတို. (ဆန်.ကျင်ဖက်မှ)လွတ်မြောက်သော မေတ္တာစိတ်ကို မှီဝဲအပ် ပွါးများအပ် ကြိမ်ဖန်များစွာပြုအပ် ယာဉ်ကဲ့သို.ပြုအပ် တည်ရာကဲ့သို.ပြုအပ် ရှေးရှူတည်စေအပ် လေ့လာအပ် ကောင်းစွာအားထုတ်အပ်သည်ရှိသော် အကျိုးတစ်ဆယ့်တစ်မျိုးတို.ကို မချွတ်ရလိမ့်မည်ဟု မြှော်လင့် နိုင်ကုန်၏။
အဘယ်တစ်ဆယ့်တစ်မျိုးတို.နည်းဟူမူ ချမ်းသာစွာ အိပ်ရ၏။ ချမ်းသာစွာနိူးရ၏။ အိပ်မက်ဆိုးကို မမြင်မက်။ လူအများ၏ ချစ်မြတ်နိုးခြင်းကို ခံရ၏။ သားရဲဘီလူးတို.၏ ချစ်မြတ်နိုးခြင်းကို ခံရ၏။
နတ်တို.စောင့်ရှောက်ကုန်၏။ (ထိုမေတ္တာစိတ်ကို ပွါးများသော သူအား) မီးအဆိပ်လက်နက်တို.
မကျ မစွဲ မဖျက်ဆီးနိုင်။ လျင်မြန်စွာစိတ်တည်ကြည်၏။ မျက်နှာအဆင်းအထူးကြည်လင်၏။
မတွေမဝေ သေရ၏။ အလွန်မြတ်သော အရဟတ္တဖိုလ်တရားကို ထိုးထွင်း၍ မသိနိုင်သော်
ရဟန်းတို.( ဆန်.ကျင်ဖက်မှ) လွတ်မြောက်သော မေတ္တာစိတ်ကို မှီဝဲအပ် ပွါးများအပ် ကြိမ်ဖန်များစွာပြုအပ် ယာဉ်ကဲ့သို.ပြုအပ် တည်ရာကဲ့သို.ပြုအပ် ရှေးရှူတည်စေအပ် လေ့လာအပ် ကောင်းစွာအားထုတ်အပ်သည်ရှိသော် ဤတစ်ဆယ့်တစ်ပါးသော အာနိသင်တို.ကို မချွတ်ရလိမ့်မည်ဟု မြှော်လင့်နိုင်ကုန်၏ဟု မိန်.တော်မူ၏။
* ၀နရောပသုတ်တော် *
အခါတစ်ပါး၌ မြတ်စွာဘုရားသည် သာဝတ္ထိပြည် အနာထပိဏ်သူဌေး၏အရံ ဇေတ၀န်ကျောင်း၌ သီတင်းသုံးနေတော်မူ၏။ ထိုအခါ နတ်သားတစ်ယောက်သည် အလွန်နှစ်သက်ဖွယ်သော အဆင်းရှိသည်ဖြစ်၍ ညဉ့်ဦးယံလွန်ပြီးသော (သန်ကောင်ယံ)အချိန်၌ ဇေတ၀န်တစ်ကျောင်းလုံးကို ထွန်းလင်းစေလျက် မြတ်စွာဘုရားအထံသို. ချဉ်းကပ်၍ မြတ်စွာဘုရားကို ရှိခိုးပြီးလျှင် တစ်ခုသောအရပ်၌ ရပ်တည်ပြီးသော် မြတ်စွာဘုရား၏ ထံတော်ပါး၌ ဤဂါထာတို.ကို လျှောက်၏။
`အဘယ်သူတို.အား နေ.၌၄င်း ညဉ့်၌၄င်း အခါခပ်သိမ်း ကောင်းမှုသည် တိုးပွါးပါသနည်း။
အဘယ်သူတို.သည် တရား၌ တည်ကုန်ရာသနည်း။ အဘယ်သူတို.သည် သီလနှင့် ပြည့်စုံကုန်သနည်း။ အဘယ်သူတို.သည် နတ်ပြည်သို. သွားကုန်သနည်း´ဟု လျှောက်၏။
`အကြင်သူတို.သည် သစ်သီးဥယျာဉ်၊ ပန်းဥယျာဉ်စိုက်ပျိုးကုန်၏။ တောသစ်ပင်ကို စိုက်ပျိုးကုန်၏။ တံတားခင်းကုန်၏။ အကြင်သူတို.သည် ရေအိုးစင်ကို၎င်း၊ ရေတွင်းကို၎င်း၊ နေရာကျောင်းကို၎င်း လှူဒါန်းကုန်၏။´
`ထိုသူတို.အား နေ.၌၄င်း ညဉ့်၌၄င်း အခါခပ်သိမ်း ကောင်းမှုသည် တိုးပွါး၏။ ထိုသူတို.သည်
တရား၌ တည်ကုန်၏။ ထိုသူတို.သည် အလေ့အထစာရိတ္တသီလနှင့် ပြည့်စုံကုန်၏။ ထိုသူတို.သည် နတ်ပြည်သို. သွားရ၏´ဟု မိန်.တော်မူ၏။
ရဟန်းတို. အလှူဒါနတို.သည် ဤနှစ်မျိုးတို.တည်း။ အဘယ်နှစ်မျိုးတို.နည်းဟူမူ ပစ္စည်းလေးပါးအလှူ`အာမိသဒါန´၄င်း၊ တရားအလှူ`ဓမ္မဒါန´၄င်းတို.တည်း။ ရဟန်းတို. အလှူဒါနတို.သည် ဤနှစ်မျိုးတို.တည်း။ ရဟန်းတို. ဤအလှူနှစ်မျိုးတို.တွင် အကြင်တရားအလှူသည် ရှိ၏။ ထိုတရားအလှူသည် မြတ်ပေသတည်းဟု (မိန်.တော်မူ၏။)
ရဟန်းတို. မှီဝဲအပ် ပွါးများအပ် အကြိမ်များစွာ ပြုအပ်သော သူ၏ အသက်ကို သတ်ခြင်းသည် ငရဲ၌ ဖြစ်စေတတ်၏။ တိရစ္ဆာန်မျိုး၌ ဖြစ်စေတတ်၏။ ပြိတ္တာဘုံ၌ ဖြစ်စေတတ်၏။ သူ၏ အသတ်ကို သတ်ခြင်း၏ အပေါ့ဆုံးအကျိုးသည် လူဖြစ်သော သူအား အသက်တိုခြင်းကို ဖြစ်စေတတ်၏။
ရဟန်းတို. မှီဝဲအပ် ပွါးများအပ် အကြိမ်များစွာပြုအပ်သော ပိုင်ရှင်မပေးသော သူတပါးဥစ္စာကို ခိုးယူခြင်းသည် ငရဲ၌ ဖြစ်စေတတ်၏။ တိရစ္ဆာန်မျိုး၌ ဖြစ်စေတတ်၏။ ပြိတ္တာဘုံ၌ ဖြစ်စေတတ်၏။
ပိုင်ရှင်မပေးသော သူတပါးဥစ္စာကို ခိုးယူခြင်း၏ အပေါ့ဆုံးအကျိုးသည် လူဖြစ်သောာ သူအား
ရဟန်းတို. မှီဝဲအပ် ပွါးများအပ် အကြိမ်များစွာ ပြုအပ်သော ကာမဂုဏ်တို.၌ မှားယွင်းသောအားဖြင့်ကျင့်ခြင်းသည် ငရဲ၌ ဖြစ်စေတတ်၏။ တိရစ္ဆာန်မျိုး၌ ဖြစ်စေတတ်၏။
ပြိတ္တာဘုံ၌ ဖြစ်စေတတ်၏။ သူ.သားအိမ်ရာဟူသော ကာမဂုဏ်တို.၌ မှားယွင်းသောအားဖြင့်
ကျင့်ခြင်း၏ အပေါ့ဆုံးအကျိုးသည် လူဖြစ်သော သူအား ရန်သူတို.နှင့်တကွ ရန်ဖြစ်စေတတ်၏။
ရဟန်းတို. မှီဝဲအပ် ပွါးများအပ် အကြိမ်များစွာပြုအပ်သော မဟုတ်မမှန်သော စကားကို ပြောခြင်းသည် ငရဲ၌ ဖြစ်စေတတ်၏။ တိရစ္ဆာန်မျိုး၌ ဖြစ်စေတတ်၏။ ပြိတ္တာဘုံ၌ ဖြစ်စေတတ်၏။ မဟုတ်မမှန်သော စကားကို ပြောခြင်း၏ အပေါ့ဆုံးအကျိုးသည် လူဖြစ်သော သူအား
မဟုတ်မမှန်သော စကားဖြင့် စွပ်စွဲခံရခြင်းကို ဖြစ်စေတတ်၏။
ရဟန်းတို. မှီဝဲအပ် ပွါးများအပ် အကြိမ်များစွာ ပြုအပ်သော ကုန်းတိုက်စကားပြောခြင်းသည် ငရဲ၌ ဖြစ်စေတတ်၏။ တိရစ္ဆာန်မျိုး၌ ဖြစ်စေတတ်၏။ ပြိတ္တာဘုံ၌ ဖြစ်စေတတ်၏။ ကုန်းတိုက်စကားပြောကြားခြင်း၏ အပေါ့ဆုံးအကျိုးသည် လူဖြစ်သော သူအား အဆွေခင်ပွန်းတို.နှင့်ကွဲပြားခြင်းကို ဖြစ်စေတတ်၏။
ရဟန်းတို. မှီဝဲအပ် ပွါးများအပ် အကြိမ်များစွာ ပြုအပ်သော ကြမ်းတမ်းသော စကားကို ပြောဆိုခြင်းသည် ငရဲ၌ ဖြစ်စေတတ်၏။ တိရစ္ဆာန်မျိုး၌ ဖြစ်စေတတ်၏။ ပြိတ္တာဘုံ၌
ဖြစ်စေတတ်၏။ ကြမ်းတမ်းသောစကားကို ပြောဆိုခြင်း၏ အပေါ့ဆုံးအကျိုးသည် လူဖြစ်သော သူအား
မနှစ်သက်ဖွယ်သော အသံကို ဖြစ်စေတတ်၏။
ရဟန်းတို. မှီဝဲအပ် ပွါးများအပ် အကြိမ်များစွာပြုအပ်သော ပြိန်ဖျင်းသော စကားကို ပြောခြင်းသည် ငရဲ၌ ဖြစ်စေတတ်၏။ တိရစ္ဆာန်မျိုး၌ ဖြစ်စေတတ်၏။ ပြိတ္တာဘုံ၌ ဖြစ်စေတတ်၏။ ပြိန်ဖျင်းသော စကားကို ပြောဆိုခြင်း၏ အပေါ့ဆုံးအကျိုးသည် လူဖြစ်သောသူအား သူတပါးတို.မနာယူအပ်သော စကားရှိသည်ကို ဖြစ်စေတတ်၏။
ရဟန်းတို. မှီဝဲအပ် ပွါးများအပ် အကြိမ်များစွာပြုအပ်သော သေအရက်ကို သောက်ခြင်းသည် ငရဲ၌ ဖြစ်စေတတ်၏။ တိရစ္ဆာန်မျိုး၌ ဖြစ်စေတတ်၏။ ပြိတ္တာဘုံ၌ ဖြစ်စေတတ်၏။ သေအရက်ကို သောက်ခြင်း၏ အပေါ့ဆုံးအကျိုးသည် လူဖြစ်သော သူအား
ရူးသွပ်ခြင်းကို ဖြစ်စေတတ်၏ဟု မိန်.တော်မူ၏။
၄၅။ အမျက်ထွက်သော ပုဂ္ဂိုလ်ဟူသည် အဘယ်နည်း။ ထိုစကား၌ အမျက်ထွက်ခြင်း`ကောဓ´ဟူသည် အဘယ်နည်း။ အကြင်အမျက်ထွက်ခြင်း အမျက်ထွက်သော အခြင်းအရာ အမျက်ထွက်သူ၏ အဖြစ် ပြစ်မှားခြင်း ပြစ်မှားသောအခြင်းအရာ ပြစ်မှားသူ၏အဖြစ် ပကတိသဘောကိုစွန်.ခြင်း ပကတိသဘောကိုစွန်.သောအခြင်းအရာ ပကတိသဘောကိုစွန်.သူ၏အဖြစ် ဆန်.ကျင်ခြင်း အဖန်ဖန်ဆန်.ကျင်ခြင်း ကြမ်းတမ်းသူ၏အဖြစ် စကားကိုပြည့်စုံစွာမဆိုနိုင်ခြင်း စိတ်နှလုံးမသာယာသောအဖြစ်သည် ရှိ၏။ ဤသည်ကို အမျက်ထွက်ခြင်း`ကောဓ´ဟူ၍ ဆိုအပ်၏။
အကြင်ပုဂ္ဂိုလ်သည် အမျက်ထွက်ခြင်း`ကောဓ´ကို မပယ်အပ်။ ဤပုဂ္ဂိုလ်ကို အမျက်ထွက်တတ်သော
၄၆ ။ ရန်ငြိုးဖွဲ.တတ်သော ပုဂ္ဂိုလ်ဟူသည် အဘယ်နည်း။ ထိုစကား၌ ရန်ငြိုးဖွဲ.ခြင်း`ဥပနာဟ´ဟူသည်
အဘယ်နည်း။ ရှေးဦးစွာ အမျက်ထွက်ခြင်းဖြစ်၏။ ထို.နောက် ရန်ငြိုးဖွဲ.ခြင်းဖြစ်၏။ ဤသို.သဘောရှိသော
အကြင်ရန်ငြိုးဖွဲ.ခြင်း ရန်ငြိုးဖွဲ.သောအခြင်းအရာ ရန်ငြိုးဖွဲ.သူ၏အဖြစ် ရှေးရှူထားခြင်း အမျက်ထားခြင်း ပြင်းစွာထားခြင်း
အစဉ်တည်ခြင်း အစဉ်ဖွဲ.ခြင်း အမျက်ကို မြဲမြံစွာပြုခြင်းသည် ရှိ၏။ ဤသည်ကို ရန်ငြိုးဖွဲ.ခြင်း`ဥပနာဟ´
ဟူ၍ ဆိုအပ်၏။ အကြင်ပုဂ္ဂိုလ်သည် ဤရန်ငြိုးဖွဲ.ခြင်းကို မပယ်အပ်။ ဤပုဂ္ဂိုလ်ကို ရန်ငြိုးဖွဲ.သော ပုဂ္ဂိုလ်
* ရဟန်းတို. သူမိုက်တို.သည် ဤနှစ်မျိုးတို.တည်း။အဘယ်နှစ်မျိုးတို.နည်းဟူမူ တရားမဟုတ်သည်၌ တရားဟုတ်၏ဟု အမှတ်ရှိသော သူ၎င်း၊ တရားဟုတ်သည်၌ တရားမဟုတ်ဟု အမှတ်ရှိသော သူ၎င်းတို.တည်း။
ရဟန်းတို. သူမိုက်တို.သည် ဤနှစ်မျိုးတို.တည်းဟု (မိန်.တော်မူ၏)။
* ရဟန်းတို. ပညာရှိတို.သည် ဤနှစ်မျိုးတို.တည်း။ အဘယ်နှစ်မျိုးတို.နည်းဟူမူ တရားမဟုတ်သည်၌ တရားမဟုတ်ဟု အမှတ်ရှိသော သူ၎င်း၊ တရားဟုတ်သည်၌ တရားဟုတ်၏ဟု အမှတ်ရှိသော သူ၎င်းတို.တည်း။
ရဟန်းတို. ပညာရှိတို.သည် ဤနှစ်မျိုးတို.တည်းဟု (မိန်.တော်မူ၏။)
*ရဟန်းတို. သူမိုက်တို.သည် ဤနှစ်မျိုးတို.တည်း။ အဘယ်နှစ်မျိုးတို.နည်းဟူမူ မိမိသို. မကျရောက်သော တာဝန်ကို ရွက်ဆောင်သောသူ၎င်း၊ မိမိသို.ကျရောက်သော တာဝန်ကို
မရွက်ဆောင်သောသူ၎င်း ဤနှစ်မျိုးတို.တည်း။ ရဟန်းတို. သူမိုက်တို.သည် ဤနှစ်မျိုးတို.
တည်း (ဟု မိန်.တော်မူ၏။)
* ရဟန်းတို. ပညာရှိတို.သည် ဤနှစ်မျိုးတို.တည်း။ အဘယ်နှစ်မျိုးတို.နည်းဟူမူ မိမိသို. မကျရောက်သော တာဝန်ကို မရွက်ဆောင်သော သူ၎င်း၊ မိမိသို. ကျရောက်သော တာဝန်ကို
ရွက်ဆောင်သော သူ၎င်းတို.တည်း။ ရဟန်းတို. ပညာရှိတို.သည် ဤနှစ်မျိုးတို.တည်း(ဟု မိန်.တော်မူ
* ရဟန်းတို. ဤမေ့လျော့ခြင်း`ပမာဒ´တရားသည် များစွာ အကျိုးမဲ့ခြင်းငှါ ဖြစ်သကဲ့သို. ဤအတူ များစွာအကျိုးမဲ့ခြင်းငှါ ဖြစ်သော အခြားတစ်ခုသော တရားကိုမျှလည်း ငါမမြင်။ ရဟန်းတို. မေ့လျော့ခြင်း`ပမာဒ´တရားသည် များစွာအကျိုးမဲ့ခြင်းငှါ ဖြစ်၏ ဟု (မိန်.တော်မူ၏)။
* ရဟန်းတို. ဤမမေ့မလျော့ခြင်း`အပ္ပမာဒ´တရားသည် များစွာအကျိုးရှိခြင်းငှါ ဖြစ်သကဲ့သို. ဤအတူ
များစွာအကျိုးရှိခြင်းငှါဖြစ်သော အခြားတစ်ခုသော တရားကိုမျှလည်း ငါမမြင်။ ရဟန်းတို. မမေ့မလျော့ခြင်း`အပ္ပမာဒ´တရားသည် များစွာအကျိုးရှိခြင်းငှါ ဖြစ်၏ ဟု (မိန်.တော်မူ၏)
* ရဟန်းတို. ဤမပွါးများအပ်သော ဤစိတ်သည် များစွာ အကျိုးမဲ့ခြင်းငှါ ဖြစ်သကဲ့သို. ဤအတူ များစွာ
အကျိုးမဲ့ခြင်းငှါဖြစ်သော အခြားတစ်ခုသော တရားကိုမျှလည်း ငါမမြင်။ ရဟန်းတို. မပွါးများအပ်သေးသော
စိတ်သည် များစွာ အကျိုးမဲ့ခြင်းငှါ ဖြစ်၏ ဟု (မိန်.တော်မူ၏။)
* ရဟန်းတို. ပွါးများအပ်ပြီးသော ဤစိတ်သည် များစွာ အကျိုးရှိခြင်းငှါ ဖြစ်သကဲ့သို. ဤအတူ များစွာအကျိုးရှိခြင်းငှါဖြစ်သော အခြားတစ်ခုသော တရားကိုမျှလည်း ငါမမြင်။ ရဟန်းတို. ပွါးများပြီးသော စိတ်သည် များစွာအကျိုးရှိခြင်းငှါ ဖြစ်၏ ဟု (မိန်.တော်မူ၏)။
* ရဟန်းတို. ဤဆင်ခြင်ခြင်း`သမ္ပဇည´တရားသည် များစွာအကျိုးရှိခြင်းငှါဖြစ်သကဲ့သို. ဤအတူ များစွာ
အကျိုးရှိခြင်းငှါဖြစ်သော အခြားတစ်ခုသော တရားကိုမျှလည်း ငါမမြင်။ ရဟန်းတို. ဆင်ခြင်ခြင်း`သမ္ပဇည´တရားသည် များစွာအကျိုးရှိခြင်းငှါ ဖြစ်၏ဟု (မိန်.တော်မူ၏။)
* ရဟန်းတို. ဘေးတို.သည် ဤလေးမျိုးတို.တည်း။ အဘယ်လေးမျိုးတို.နည်းဟူမူ မီးဘေး၊ ရေဘေး၊ မင်းဘေး၊
ခိုးသူဘေးတို.တည်း။ ရဟန်းတို. ဘေးတို.သည် ဤလေးမျိုးတို.တည်းဟု (မိန်.တော်မူ၏။)
* ရဟန်းတို. အနှစ်တို.သည် ဤလေးမျိုးတို.တည်း။ အဘယ်လေးမျိုးတို.နည်းဟူမူ သီလအနှစ်၊ သမာဓိအနှစ်၊
ပညာအနှစ်၊ လွတ်မြောက်မှုဝိမုတ္တိအရဟတ္တဖိုလ်အနှစ်တို.တည်း။ ရဟန်းတို. အနှစ်တို.သည် ဤလေးမျိုးတို.တည်းဟု
* ရဟန်းတို. ရှိခိုးခြင်းတို.သည် ဤသုံးမျိုးတို.တည်း။ အဘယ်သုံးမျိုးတို.နည်းဟူမူ ကိုယ်ဖြင့်ရှိခိုးခြင်း၊ နှုတ်ဖြင့်ရှိခိုးခြင်း၊ စိတ်ဖြင့် ရှိခိုးခြင်းတို.တည်း။ ရဟန်းတို. ရှိခိုးခြင်းတို.သည် ဤသုံးမျိုးတို.တည်းဟု (မိန်.တော်မူ၏။)
* ရဟန်းတို. အလင်းတို.သည် ဤလေးမျိုးတို.တည်း။ အဘယ်လေးမျိုးတို.နည်းဟူမူ လအလင်း၊ နေအလင်း၊
မီးအလင်း၊ ပညာအလင်းတို.တည်း။ ရဟန်းတို. အလင်းတို.သည် ဤလေးမျိုးတို.တည်း။ ရဟန်းတို. ဤအလင်းလေးမျိုးတို.တွင် ပညာအလင်းသည် အမြတ်ဆုံးပေတည်းဟု (မိန်.တော်မူ၏။)
* ရဟန်းတို. တရားတို.သည် ဤနှစ်မျိုးတို.တည်း။ အဘယ်နှစ်မျိုးတို.နည်းဟူမူ အောက်မေ့ခြင်း`သတိ´၄င်း၊ ဆင်ခြင်ခြင်း`သမ္ပဇည´၄င်းတို.တည်း။ ရဟန်းတို. တရားတို.သည် ဤနှစ်မျိုးတို.တည်းဟု (မိန်.တော်မူ၏။)
* ရဟန်းတို. တရားတို.သည် ဤနှစ်မျိုးတို.တည်း။ အဘယ်နှစ်မျိုးတို.နည်းဟူမူ အကျင့်သီလ၏ စင်ကြယ်ခြင်း`သီလ၀ိသုဒ္ဓိ´၄င်း၊ ဉာဏ်အမြင်အယူ၏ စင်ကြယ်ခြင်း`ဒိဋ္ဌိဝိသုဒ္ဓိ´၄င်းတို.တည်း။
ရဟန်းတို. တရားတို.သည် နှစ်မျိုးတို.တည်းဟု (မိန်.တော်မူ၏။)
* ရဟန်းတို. တရားတို.သည် ဤနှစ်မျိုးတို.တည်း။ အဘယ်နှစ်မျိုးတို.နည်းဟူမူ အောက်မေ့ခြင်း အား `သတိဗလ´၄င်း၊ တည်ကြည်ခြင်း အား`သမာဓိဗလ´၄င်းတို.တည်း။ ရဟန်းတို. တရားတို.သည် ဤနှစ်မျိုးတို.တည်းဟု (မိန်.တော်မူ၏။)
* ရဟန်းတို. တရားတို.သည် ဤနှစ်မျိုးတို.တည်း။ အဘယ်နှစ်မျိုးတို.နည်းဟူမူ ဘ၀မြဲ၏ဟု ယူသော
`ဘ၀ဒိဋ္ဌိ´၄င်း၊ ဘ၀ပြတ်၏ဟု ယူသော `၀ိဘ၀ဒိဋ္ဌိ´၄င်းတို.တည်း။ ရဟန်းတို. တရားတို.သည် ဤနှစ်မျိုးတို.တည်းဟု (မိန်.တော်မူ၏။)
ရဟန်းတို. တရားလေးပါးတို.နှင့် ပြည့်စုံသောသူသည် ဆောင်ယူ၍ ချထားအပ်သကဲ့သို. ဤအတူ ငရဲသို. ရောက်ရ၏။
အဘယ်လေးပါးတို.နည်းဟူမူ မဟုတ်မမှန်ပြောလေ့ရှိ၏။ ကုန်းစကားကို ဆိုလေ့ရှိ၏။ ကြမ်းတမ်းသော စကားကို ဆိုလေ့ရှိ၏။ ပြိန်ဖျင်းသော စကားကို ဆိုလေ့ရှိ၏။
ရဟန်းတို. ဤတရားလေးပါးတို.နှင့် ပြည့်စုံသောသူသည် ဆောင်ယူ၍ ချထားအပ်သကဲ့သို. ဤအတူ ငရဲသို. ရောက်ရ၏။
ရဟန်းတို. တရားလေးပါးတို.နှင့် ပြည့်စုံသော သူသည် ဆောင်ယူ၍ ချထားအပ်သကဲ့သို. ဤအတူ နတ်ပြည်သို. ရောက်ရ၏။
အဘယ်လေးပါးတို.နည်းဟူမူ မဟုတ်မမှန်ပြောခြင်းမှ ရှောင်ကြဉ်၏။ ကုန်းစကားကို ဆိုခြင်းမှ ရှောင်ကြဉ်၏။
ကြမ်းတမ်းသော စကားကို ဆိုခြင်းမှ ရှောင်ကြဉ်၏။ ပြိန်ဖျင်းသောစကားကို ဆိုခြင်းမှ ရှောင်ကြဉ်၏။
ရဟန်းတို. ဤတရားလေးပါးတို.နှင့် ပြည့်စုံသော သူသည် ဆောင်ယူ၍ ချထားအပ်သကဲ့သို. ဤအတူ နတ်ပြည်သို. ရောက်ရ၏ဟု (မိန်.တော်မူ၏။)
ရဟန်းတို. တရားခြောက်မျိုးတို.နှင့် ပြည့်စုံသော ရဟန်းသည် မကြာမီပင် ကုသိုလ်တရားတို.၌ ကြီးကျယ်ခြင်း ပြန်.ပြောခြင်းသို. ရောက်၏။
ရဟန်းတို. ဤသာသနာတော်၌ ရဟန်းသည် (ဉာဏ်)အလင်းရောင်များပြား၏။ အားထုတ်မှုလည်း များပြား၏။ နှစ်သက်ဝမ်းမြောက်မှုလည်းများ၏။ ကုသိုလ်တရားတို.၌ မရောင့်မှုလည်း များပြား၏။
ကုသိုလ်တရားတို.၌ တာဝန်ကို ပစ်ချမထား။ စွမ်းနိုင်သည်ထက်ပိုမို၍လည်း အားထုတ်၏။
ရဟန်းတို. ဤတရားခြောက်မျိုးတို.နှင့် ပြည့်စုံသော ရဟန်းသည် မကြာမီပင် ကုသိုလ်တရားတို.၌ ကြီးကျယ်ခြင်း ပြန်.ပြောခြင်းသို. ရောက်၏ဟု (မိန်.တော်မူ၏။)
ရဟန်းတို. တရားခြောက်မျိုးတို.ကို မပယ်မူ၍ အရဟတ္တဖိုလ်ကို မျက်မှောက်ပြုရန် မထိုက်။ အဘယ်ခြောက်မျိူးတို.နည်းဟူမူ မာန်မူမှု၊ ယုတ်သော မာန်မူမှု၊ အလွန်မာန်မူမှု၊ အထင်ကြီးမှု၊ ခက်ထန်မှု၊ အလွန်နိမ်.ကျမှုတို.တည်း။
ရဟန်းတို. ဤတရားခြောက်မျိုးတို.ကို မပယ်မူ၍ အရဟတ္တဖိုလ်ကို မျက်မှောက်ပြုရန် မထိုက်။
ရဟန်းတို. တရားခြောက်မျိုးတို.ကို ပယ်သည်ရှိသော် အရဟတ္တဖိုလ်ကို မျက်မှောက်ပြုရန် ထိုက်၏။
အဘယ်ခြောက်မျိုးတို.နည်းဟူမူ မာန်မူမှု၊ ယုတ်သောမာန်မူမှု၊ အလွန်မာန်မူမှူ၊ အထင်ကြီးမှု၊
ရဟန်းတို. ဤတရားခြောက်မျိုးတို.ကို ပယ်သည်ရှိသော် အရဟတ္တဖိုလ်ကို မျက်မှောက်ပြုရန်
ရဟန်းတို. သင်္ခတတရား၏ သင်္ခတဟု မှတ်ကြောင်းလက္ခဏာတို.သည် ဤသုံးမျိုးတို.တည်း။
အဘယ်သုံးမျိုးတို.နည်းဟူမူ ဖြစ်ခြင်း`ဥပါဒ်´လက္ခဏာသည် ထင်ရှား၏။ ပျက်ခြင်း`ဘင်´လက္ခဏာသည် ထင်ရှား၏။ ဥပါဒ်အခိုက်အတန်.၏ ပြောင်းလဲခြင်း`ဌီ´လက္ခဏာသည် ထင်ရှား၏။
ရဟန်းတို. သင်္ခတတရား၏ သင်္ခတဟု မှတ်ကြောင်းလက္ခဏာတို.သည် ဤသုံးမျိုးတို.ပေတည်းဟု (မိန်.တော်မူ၏)။
ရဟန်းတို. အသင်္ခတတရား၏ အသင်္ခတဟု မှတ်ကြောင်းလက္ခဏာတို.သည် ဤသုံးမျိုးတို.တည်း။
အဘယ်သုံးမျိုးတို.နည်းဟူမူ ဖြစ်ခြင်း`ဥပါဒ်´လက္ခဏာသည် မထင်ရှားပေ။ ပျက်ခြင်း`ဘင်´လက္ခဏာသည် မထင်ရှားပေ။ ဥပါဒ်အခိုက်အတန်.၏ ပြောင်းလဲခြင်း`ဌီ´လက္ခဏာသည် မထင်ရှားပေ။
ရဟန်းတို. အသင်္ခတတရား၏ အသင်္ခတဟု မှတ်ကြောင်းလက္ခဏာတို.သည် ဤသုံးမျိုးတို.ပေတည်းဟု (မိန်.တော်မူ၏)။
** ရဟန်းတို. ဤပျင်းရိခြင်း`ကောသဇ္ဇ´တရားသည် များစွာအကျိူးမဲ့ခြင်းငှါ ဖြစ်သကဲ့သို. ဤအတူ
များစွာအကျိူးမဲ့ခြင်းငှါဖြစ်သော အခြားတစ်ခုသော တရားကိုမျှလည်း ငါမမြင်။ ရဟန်းတို. ပျင်းရိခြင်း`ကောသဇ္ဇ´တရားသည် များစွာအကျိူးမဲ့ခြင်းငှါ ဖြစ်၏ဟု (မိန်.တော်မူ၏။)**
** ရဟန်းတို. ဤထက်သန်သော လုံ.လ`၀ီရိယာရ မ္ဘ´တရားသည် များစွာအကျိူးရှိခြင်းငှါ ဖြစ်သကဲ့သို. ဤအတူ
များစွာအကျိူးရှိခြင်းငှါဖြစ်သော အခြားတစ်ခုသော တရားကိုမျှလည်း ငါမမြင်။ ရဟန်းတို. ထက်သန်သော လုံ.လ`၀ီရိယာရ မ္ဘ´တရားသည် များစွာအကျိူးရှိခြင်းငှါ ဖြစ်၏ဟု (မိန်.တော်မူ၏။)**
**ရဟန်းတို. တရားတို.သည် ဤနှစ်မျိုးတို.တည်း။ အဘယ်နှစ်မျိုးတို.နည်းဟူမူ အောက်မေ့ခြင်း`သတိ´၄င်း၊ ဆင်ခြင်ခြင်း`သမ္ပဇည´၄င်းတို.တည်း။
ရဟန်းတို. တရားတို.သည် ဤနှစ်မျိုးတို.တည်းဟု (မိန်.တော်မူ၏။)
* ဒါနပြုပါ *
* ပစ္စည်းဥစ္စာ၊ စွဲမက်လာသည့်
* လှူဒါန်းမှုကို၊ ပြုသောသူအား
" အတွေးအမြင် "
* ကတိသစ္စာပျက်ခြင်းကြောင့် ရှုံးနိမ့်ခြင်းဖြစ်ရ၏။
* ရာဂကြောင့် မကောင်းမှုဖြစ်၏။
* ချစ်ခြင်းကြောင့် ကိုယ်ဖြင့် မကောင်းမှုကို ပြု၏။
* ဘုရား၌ပြစ်မှားခြင်းကြောင့် များစွာအကျိုးမဲ့ရ၏။
* တရား၌ ပြစ်မှားခြင်းကြောင့် များစွာအကျိုးမဲ့ရ၏။
* ကာမဂုဏ်တို.၌ မှားယွင်းစွာကျင့်သောသူသည် စိတ်ညစ်ရ၏။
* ကာမဂုဏ်တို.၌ မှားယွင်းစွာမကျင့်သောသူသည် စိတ်ချမ်းသာရ၏။
* ၀ိပဿနာရှုလျှင် ရုပ်နာမ်မြင်၏။
* မကောင်းမှုသည် မကောင်းသောအကျိုးကို ပေး၏။
ကောင်းမှုသည် ကောင်းသော အကျိုးကို ပေး၏။
* ကောင်းသောအမှုကိုပြုသောသူသည် စိတ်ချမ်းသာရ၏။
* မိဘကို ပြစ်မှားခြင်းကြောင့် များစွာအကျိုးမဲ့ခြင်းဖြစ်ရ၏။
* ဆရာကို ပြစ်မှားခြင်းကြောင့် များစွာအကျိုးမဲ့ခြင်းဖြစ်ရ၏။
* ပျင်းရိခြင်းကြောင့် များစွာအကျိုးမဲ့ခြင်းဖြစ်ရ၏။
* လောင်းကစားခြင်းသည် မကောင်းသော အလုပ်ဖြစ်၏။
* လောင်းကစားခြင်းကြောင့် မကောင်းသော အကျိုးတို.သည် ဖြစ်ကုန်၏။
* လောဘ၏အလိုကိုလိုက်သော သူသည် အကုသိုလ်အမှုကို ပြု၏။
* မရိုးသားသောသူသည် ယုတ်နိမ်.ခြင်းကို ကြုံတွေ.ရ၏။
* ကတိသစ္စာကို စောင့်ထိန်းခြင်းသည် မြတ်၏။
* မှားသောစကားကို ပြောဆိုခြင်းသည် မမြတ်ပေ။
* မှန်သော စကားကိုပြောဆိုခြင်းသည် ကောင်းသော အကျိုးတို.ကို ဖြစ်စေ၏။
* မိဘတို.ကို ကိုယ်၊နှုတ်၊စိတ်တို.ဖြင့် ပြစ်မှားခြင်းသည် ယုတ်ညံ့သောအကျိုးတို.ကို ဖြစ်စေ၏။
ကဗျာ ဓမ္မ အမြင် Комментарии